Fuchsia OS inotanga kushandiswa, asi panguva ino chete mumidziyo yeIoT | Linux Vakapindwa muropa
Kana ari masisitimu anoshanda, senge mune zvese zvinhu, pakupedzisira vanozopedzisira vashandisa mashoma. Mumakomputa, anonyanya kushandiswa pasi pano ndiWindows, anoteverwa nekure nemaMacOS uye nezvimwe zvakawanda kuseri kweavo vanobva paLinux. Kana tichienda kumunda wenhare mbozha, chinonyanya kushandiswa iApple, uye Google yanga iri imwe yemakambani anga achifunga kuti pane nzvimbo yechimwe chinhu, kunyanya chirongwa chekushandisa chinotora makore mukusimudzira uye inonzi Fuchsia OS.
Dai zvaive zvisiri zveGoogle, ini ndaiti ndiyo inoshanda system iyo yakazvarwa kufa. Kuve imwe yemakambani ehunyanzvi akakosha kwazvo pasirese, handina chokwadi. Uye kusahadzika kwakawanda kwandinako mushure mekunge vazivisa (kuburikidza 9to5Google) chii zvishandiso zvekutanga kuzvishandisa ichave iyo Nest Hub. Hatisi kutaura pamusoro pemidziyo yakanyanya kushandiswa nhasi, asi iyo Internet yezvinhu, kana IoT yezita rayo muChirungu, ichave chikamu chehupenyu hwemunhu wese munguva pfupi.
Fuchsia OS inosvika kuNest Hub
Vakasarudzwa Nest Hub vanogashira iyo nyowani yekushandisa sisitimu. Kugadziridza sisitimu yekushandisa kune yepamusoro vhezheni yacho kunogona kuunza matambudziko, saka zviri nyore kuti shanduko yakaita seiyi isvike nemamwe matambudziko kupfuura anotarisirwa. Nechikonzero ichocho, Google ichaendesa iyo yekuvandudza zvishoma nezvishoma.
Kana iri yezveramangwana renguva refu yeFuchsia OS, Google haipe ruzivo rwakawanda, ichizvisarudzira kutaura kuti kwete chete kune mafoni nemafoni ePc, asi kuti isu tiri kuwedzera kupinda munyika yeIoT. Iyo yekushandisa sisitimu yakagadzirirwa kuti ikwanise kumhanyisa Android kunyorera, izvo zvinotisiya isu zvakatonyanya kuvhiringidzika. Kune desktop ivo vatove neChrome OS, yakaganhurirwa system asi iyo inogona kumhanya Linux maapplication uye Android; zvema mobiles uye mapiritsi, uye zvakare yeTV, ivo vane Android; ikozvino iripo Fuchsia, uye panguva ino zviri nyore kufunga kuti ichatarisa pane kumba otomatiki.
Kufunga izvo kwete zvinoenderana nelinux, iyo inogadzirwa kubva pakutanga, ndingadai ndakaifarira zvakanyanya kuve imwe nzira yemafoni uye kunyangwe desktop, kungoona izvo zvinokwanisa kuitwa neGoogle, asi pamwe vakafunga kuti, zvirinani munguva pfupi, kwete zano rakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fuchsia OS iri pano, asi pamwe handizvo zvawaitarisira
Chrome 91 inosvika nerutsigiro rweWebSocket zvikumbiro pamusoro peHTTP / 2 uye nekuvandudza kwevagadziri